बोल्दाबोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, अन्तरहृदयदेखि नै रुन मन लागेर आउँछ ! – List Khabar
Home / समाचार / बोल्दाबोल्दै बिरामीले आँखा चिम्लिन्छन्, अन्तरहृदयदेखि नै रुन मन लागेर आउँछ !
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 43 Views
दुई वर्षदेखि म धुलिखेल हस्पिटलमा नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत छु । कोरोना महामारीको संक्रमण शुरु भएदेखि भने म अस्पतालको आईसीयू केयरमा सेवा गर्दै आइरहेकी छु ।
कोरोनाको पहिलो लहर जब नेपालमा पनि शुरु भयो, त्यसबेलाको अवस्था निकै फरक थियो । नयाँ महामारी भएकाले पनि होला निकै त्रासको अवस्था थियो ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर निकै फरक अनुभव गरेकी छु । पहिला कोरोना भन्नेबित्तिकै हाम्रो हातखुट्टा नै काँपेर आएको थियो ।
र पनि यो पेशामा त्रासभन्दा मानवीय सेवालाई बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने अठोट कतै मनमा थियो । यद्यपि त्यसबेला कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सेवा गर्दा कसरी पीपीई लगाउने होला भन्ने पीर थियो ।
पीपीई भनेकै के हो भन्नेसम्म जानकारी थिएन । पछि पीपीई लगाएर लामो समय कसरी काम गर्ने होला ? खाना नखाई, ट्वाइलेट नगाई कसरी बिरामीको उपचारमा खटिने होला ? भन्ने चिन्ता थियो । तर अहिले त्यही कुरा सजिलै गर्न सकिने बानी परिसकेको छ । यो त भयो व्यक्तिगत विषय ।
बिरामीको अवस्था भने पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा फरक पाएकी छु । पहिला बिरामी भएर आउने संक्रमितहरु पनि ठीकठाक अवस्थामै आउनुहुन्थ्यो । आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने अवस्थाकै आउनुहुथ्यो ।
तर दोस्रो लहर शुरु भएपछि बिरामी भएर आउनेहरु निकै जटिल अवस्थामा आउने गरेको पाएकी छु । उहाँहरु निकै गाह्रो भएपछि अस्पताल आउनुभएको जस्तो अनुभव गरेकी छु । बिरामी मात्र होइन बिरामीका परिवारजन पनि निकै डराएको मनस्थितिमा अस्पताल लिएर आउनुहुन्छ ।
हामी त्यस्ता बिरामीको सेवामा, जीवन रक्षाका लागि आफ्ने बुद्धि, ज्ञान, सीप र उपकरणले भ्याएसम्म भोक, प्यास र निद्रा नभनी लागिरहन्छौं । त्यसमाथि बिरामीका आफन्तले हामीलाई ‘तपाईंहरु नै भगवान हो, जे सक्नुहुन्छ तपाईंहरुबाटै सम्भव छ’ भनेर निकै आशा र भरोसाको भारी बोकाउनुहुन्छ ।
त्यसले हामीलाई नैतिक मात्र होइन भावनात्मक दबाब पारिदिन्छ । हामीले बिरामीको सकेजति केयर गर्दागर्दै र कुरा गर्दागर्दै पनि कतिपय बिरामी आँखा चिम्लिदिनुहुन्छ, त्यो बेला भने हाम्रो मन निकै भारी भएर आउँछ । भित्र कतै निकै गहिरो दुःखे झैं हुन्छ । हामीले सकेको गर्दागर्दै पनि केही गर्न सकेनौं कि जस्तो पीडाबोध हुन्छ ।
कोरोनाको बिरामीहरूको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुँदा आफन्तहरुलाई त तनाव हुने नै भयो, हामी पनि कम तनावमा हुँदैनौं । निको बनाएर कति चाँडो घर पठाउँ भनेर सेवा गरेको बिरामी कहिल्यै घर नफर्कने गरी निदाइदिंदा निकै नमिठो लाग्छ, मन पोल्छ, आफन्तलाई के भनिदिनुजस्तो हुन्छ । हामीलाई पनि निक्कै गाह्रो हुन्छ ।
केहीबेर अघि बोलिरहेको, केही सोधिरहेको, केही भनिरहेको बिरामी पनि केही छिनमै कोल्याप्स भइदिंदा निकै मन कुँडिन्छ । अन्तरहृदयदेखि नै रुन मन लागेर आउँछ । पेशा नै यस्तो, रोएर नहुने ! कोरोनाको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरुको अवस्था सम्झेर सिरियस भएर आउने नयाँ बिरामी देख्दा पनि निकै डर र चुनौती महसूस हुन्छ–कतै बचाउन नसकिने हो कि ? भनेर ।
तर बिरामीहरुले पनि सिरियस भएपछि मात्रै अस्पताल आउनेभन्दा बिरामी हुँदै चिकित्सककोमा सम्पर्क गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ, यति धेरै जटिल अवस्था र कारुणिक अवस्था कमै आउँथ्यो होला । त्यो प्रकारको अवस्था भएको भए बिरामीको धेरै समयसम्म केयर गर्न सक्थ्यौं होला भन्ने अहिले पनि लाग्छ ।
आईसीयू खाली नहुँदा उहाँको एक घण्टापछि मृत्यु भयो । हामीले हेर्दाहेर्दै र केही गर्न खोज्दाखोज्दै उहाँले आँखा चिम्लिएको देख्दा मेरो आँखा निकै बेरसम्म रसायो । एकफेर त डाँको छोडेर रुन मन लागेर आयो । तर के गर्नु..?
यस्ता घटनाले हामीलाई पनि कसरी काम गर्नु भन्ने तनाव हुन्छ । सबै कुराहरु म्यानेज गर्न नसक्दा वा म्यानेज हुने स्थिति नहुँदा आँखै अगाडि धेरैको ज्यान गयो, त्यसले हामीलाई पनि होपलेस जस्तो बनायो । तर कतिपय नसोचेका बिरामी पनि निको भएका घटनाले भने उत्साहित पनि बताउँछ ।
उपचार र संक्रमितको केयरका क्रममा तमाम भोगाइहरु छन् । कतिपय बिरामीहरूले ‘मलाई बचाउनुस् नानी’ भनेर आँखाबाट आँसु बगाइरहँदा हाम्रो मनमा पनि आफ्नै आमाबुवा, दाजु-दिदी रोइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । जब हजार कोसिस गर्दागर्दै जोगाउन सकिंदैन, आफूले पनि धेरै कुरा गुमाएको अनुभूति हुन्छ । अनलाईन खबरबाट साभार
Previous कालो अंगुर खानुका ५ फाइदा साथै यी ६ रोगहरु सग लड्न मद्दत गर्छ ।
Next बिहानै तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता छन ९ फाइदाहरु ।